Dagaal mar kale ka qarxay Beledweyne - BBC Somali
Dagaal mar kale ka qarxay Beledweyne
18 Maajo 2016
Image caption Dagaal beeledka ayaa dhowr jeer ku soo noqnoqday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan.
Dhowr qof ayaa ku dhintay dagaal maanta mar kale ka qarxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa dib u billowday saaka, waxaana kooxaha dagaalamaya ay isu adeegsanayaan qoryo ku rakiban gawaarida dagaalka iyo gantaalada garbaha laga tuuro.
Seddex qof oo ka mid ah miliishiyadi dagaalamaysay ayaa saaka dagaalka ku dhintay iyadoo tiro intaa kabadana ay ku dhaawacmeen sida ay BBC-da u sheegeen dad ku sugan xaafadda uu dagaalku ka socdo.
Sidoo kale agaasimaha isbitalka Beledweyne Dr Axmed ayaa BBC-da u sheegay in labo qof oo rayid ah oo ay xabbado wiifto ah kula dhaceen xaafado ka baxsan aaga uu dagaalku ka socdo la soo gaarsiiyay isbitalka, waxana markii danbe geeriyooday mid kamid ah labadaas qof oo ay xabbadau uga dhacday madaxa.
Dagaalka oo xoogiisu uu ka dhacayo xaafadda Hawlwadaag ayaanay dadku madaxa qaadin tan iyo shalay sababtoo ah xaafadda qaybo ka mid ah waxa jaray fataahada webiga Shabeelle uu magaalada ku sameeyay, iyadoo dhinaca kalena ay tahay halka ay ku dagaalamayaan miliishiyo beeleedyada iska soo horjeeda.
Magaalo Muxumad Xuseen oo ka mid ah haweenka ku nool xaafadda Hawlwadaag ayaa BBC-da u sheegtay sida uu dagaalku u bilowday in aanay dibada u bixin iyada iyo carruurteedu sababo la xiriir dagaalka oo ka socda halkii ay ka bixi lahaayeen.
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Rooble oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay in si deg deg ah loo joojiyo colaadda gobolka ka socota, isagoo ka codsay ugaasyada beelaha dagaalamaya in ay deg deg ugu soo laabtaan magaalada Beledweyne si xal loogu helo dhibaatada socota.
Ugaaska ayaa ku eedeeyay dhinacyo aanu carabaabin in ay ku lug leeyihiin dhibaatada gobolka ka socota.
Shalay galinkii danbe galbeeka gobolka Hiiraan labo nin ayaa loo dilay aano qabiil, taasoo salka ku haysa dagaalka hadda ka socda Beledweyne.
Dagaalka u dhexeeya miliishiyo beeleedyada ayaa ku soo laablaabtay gobolka Hiiraan, inkastoo dhawr jeer heshiisyo laga gaaray haddana mar kasta colaadu way soo laabanaysay, taasoo muujinaysa in aan la abaarin gunta waxa keenaya colaadda beelaha.